ULwimi lweeGrafu kunye neeKharityhulam zabafundi be-ESL
Iilwimi IsiNgesi saseBusiness
Ulwimi lwezigrafu kunye neetshathi zibhekisela kumagama kunye nemigca esetyenziswayo xa kuchaza iziphumo eziboniswe kule fom. Olu lwimi lubaluleke ngakumbi xa lenza iintetho kuba iitshati kunye negrafu zilinganisa amanani ahlukeneyo kwaye zincedo xa zibonisa inani elikhulu lolwazi olufuneka liqondwe ngokukhawuleza, kubandakanywa amaqiniso kunye namanani, ulwazi lweenkcukacha, inzuzo kunye nokulahleka, ulwazi lokuvota, njl njl.
Isigama samaGrafu kunye neeKhadi
Kukho inani leentlobo ezahlukeneyo zegrafu kunye neetshathi ezibandakanya:
Uludwe lweMida kunye neGrafu
Iibharaki zeBhara kunye neeGrafu
Iichibizo zePie eziqhutywe
Amashadi elayini kunye neetshathi zebar ziba ne-axis ngqo kunye ne-axis ene-axis. I-axis nganye ibhalwe phantsi ukuba ibonise uluphi uhlobo lwengcaciso equlethe. Ulwazi oluqhelekileyo olubandakanyiweyo kwi-axis ecacileyo kunye neentambo zibandakanya:
ubudala - indala kangakanani
bunzima - bunzima kangakanani
ukuphakama - indlela ende
Umhla - umhla, inyanga, unyaka, njl.
ixesha - lifuneka ixesha elingakanani
ubude - bude kangakanani
ububanzi - bunjani
iidridi - njani kushushu okanye kubanda
ixesha - ubude bexesha elifunekayo
Kukho inani lamagama athile kunye namazwi asetshenziselwa ukuchaza nokuxoxa ngeigrafu kunye namashadi. Esi sigama sibaluleke ngakumbi xa sibonisa amaqela abantu. Uninzi lweelwimi zamagrafu kunye neetshathi zihambelana nokuhamba. Ngamanye amagama, ulwimi lwegrafu kunye neetshathi zidla ngokuthetha ngentlangano encinci okanye enkulu okanye ukungafani phakathi kwamaphuzu eenkcukacha ezahlukeneyo.
Jonga kule ilwimi yamagrafu kunye namashadi ukukunceda ukuphucula ikhono lakho lokuthetha ngamagrafu kunye namashadi.
Olu luhlu lulandelayo lenzi nesitenxo esisetyenziselwa ukuthetha ngokunyakaza okulungileyo kunye nokungalunganga, kunye nezibikezelo. Umzekelo wezivakalisi zifunyanwa emva kwecandelo ngalinye.
ukuphucula - ukuphuculwa
ukufumana kwakhona - ukubuyiswa
ukwandisa - ukwanda
Ukuthengisa kuye kwenyuka ngaphezu kwekota ezimbini ezidlulileyo.
Siye sabona ukunyuka kwemfuno yabathengi.
Ukuzithemba kwabathengi kuphindwe kwikota yesibini.
Kukho ukwanda kwe-23% ukususela ngoJuni.
Ngaba ubonile naluphi na uphuculo olwanelisayo kumxhasi?
ukuhla - ukwehla
ukunciphisa - ukwehla
ukuba zibi kakhulu - isithuba
ukuhlakala - ukudibanisa
Imali yophando kunye nophuhliso luye lwawa ngama-30% ukususela ngoJanuwari.
Ngelishwa, siye sabona ukwehla kweenyanga ezintathu ezidlulileyo.
Njengoko uyakubona, ukuthengisa kuye kwandula kummandla osenyakatho-mpuma.
Ukusetyenziswa kwemali kaRhulumente kuye kwehla ngo-10% kwiminyaka emibini edluleyo.
Kukho i-slip kwinzuzo kulekota edlulileyo.
Ukuthengiswa kweencwadi zokudibanisa kuye kwancipha kweekota ezintathu.
Ukuqikelela ukuhamba kwexesha elizayo
kwiprojekthi - uvavanyo
ukubikezela - ukubikezela
ukuqikelela - ukubikezela
Siphakamisa ukuphuculwa kweentengiso kwiinyanga ezizayo.
Njengoko ubona kwiseshi, sichaza ukuba uphando olongezelelweyo nophuhliso lwentsebenzo lonyaka ozayo.
Siyaxela kwangaphambili ukuthengiswa kokuthengisa ngoJuni.
Olu luhlu lubonelela izichazi kunye nezivakalisi ezisetyenziselwa ukuchaza ngokukhawuleza, ngokukhawuleza, ngokugqithiseleyo, njl. Isichazi ngasinye / isibini sesibhengezo siquka inkcazo kunye nomzekelo wesigwebo.
ncinane - encinane = ingabalulekanga
Kukho ukuhla kwehla kwintengiso.
Iintengiso ziye zancipha kancane kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo.
ubukhali - bukhali = ukunyakaza okukhawulezayo, olukhulu
Utyalo-mali lwaphakama ngokukhawuleza ngekota yokuqala.
Senze ukwanda ngokukhawuleza kotyalo-mali.
ngokukhawuleza - ngokukhawuleza = ukuguquka ngokukhawuleza
Iintengiso ziye zawa ngokukhawuleza ngoMatshi.
Kwakukho ukulahla ngokukhawuleza kwintengiso ngo-Matshi.
ngokukhawuleza-ngokukhawuleza = ngokukhawuleza, ngokukhawuleza
Sandise ngokukhawuleza kulo lonke elaseKhanada.
Inkampani yenza ukwanda ngokukhawuleza kulo lonke elaseKhanada.
ngokukhawuleza - ngaphandle kwesixwayiso
Ngelishwa, umdlalo wabathengi wancipha ngokukhawuleza.
Kwakukho ukwehla ngokukhawuleza kwintengiso yabathengi ngoJanuwari.
ephawulekayo - ngokuphawulekayo = kakhulu, kakhulu kakhulu
Senze ngcono ukwaneliseka kwabathengi kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo.
Njengoko ubona kwitshathi, ukukhula okuphawulekayo kufike emva kokuba sitshale imali emitsha mveliso.
ukuzola - ukuzola = ngokulinganayo, ngaphandle kokutshintsha okukhulu
Iimarike zenzile ngokukhawuleza zenzeke ngokutsha.
Njengoko unokubona kwigrafu, abathengi baye bahlaziya kwiinyanga ezimbalwa ezedlule.
flat = ngaphandle kweenguqu
Inzuzo iye yiplatile kwiminyaka emibili edlulileyo.
ngokukhawuleza - kungekho = akukho tshintsho
Kukho ukuphuculwa okuqhubekayo kwiinyanga ezintathu ezedlulileyo.
Ukuthengisa kuye kwaphucuka ngokukhawuleza ukususela ngoMatshi.
Iingcali zoLwazi lweZakhono zoLwazi kwi-ESL Abafundi
Iintlobo zeeNcwadi zoShishino
Ibhanki kunye nezeMali kwiShishini
Konke ngeLizwi lesiFrentshi Un Soupçon
Emma Watson: Inkqubela ye-Fan-Favorite 'Regress' Actress